EMoriya i-ETA | Faka isicelo somkhenkethi wakho we-ETA kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo seMorocco seVisa kwi-Intanethi
Ngokwaziswa kwe-ETA eya eMorocco, ukufumana olu xwebhu lokuhamba sele kulula kakhulu. Abahambi ngoku bangafaka isicelo solu xwebhu lokuhamba ukusuka nakweyiphi na indawo, bengakhange batyelele kwindlu yozakuzo. Indawo ye-ETA yabakhenkethi inokufumaneka kubemi bala mazwe alandelayo - iMali, iGuinea neRiphabhlikhi yaseCongo. Ukufaka isicelo se-ETA, uya kudinga incwadana yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, itikiti lokubuyela ngenqwelomoya, isitetimenti sasebhankini, i-inshurensi yokuhamba / impilo kunye nobungqina bendawo yokuhlala. Abatyeleli kufuneka babe nencwadana yokundwendwela esebenzayo iinyanga ezi-6 okanye ngaphezulu. Yonke inkqubo yesicelo se-eVisa inokwenziwa kwi-intanethi.
Iinkcukacha zaseMoriya Visa
Yintoni ugunyaziso lohambo lweMeditera ngeeMoto (ETA)?
Xa usiya kwilizwe langaphandle, into yokuqala ekufuneka uyinyamekele kukufumana i-visa yelo lizwe. Ngaphandle kolu xwebhu lokuhamba, abahambi abavumelekanga ukuba bangene kumhlaba welizwe. Ke, ukuba ucwangcisa uhambo lokuya eMorobha, kuyakufuneka uzuze ugunyaziso lweeNdawo zokuHamba ngeMotoriya (i-ETA). Olu luxwebhu lwaseburhulumenteni, olunika iindwendwe imvume yokungena eMorocco kunye nokuhamba ngaphakathi komda wayo. Inkqubo ye-elektroniki yokufumana i-Visa yinkqubo elula kakhulu evumela abantu ukuba bafake izicelo zoxwebhu lokuhamba kwi-Intanethi ngokupheleleyo, ngaphandle kokuthatha ixesha lokuya kwi-Embassy.
Ungasifaka njani isicelo seMoriya ETA ekwi-Intanethi?
Inkqubo yokwenza isicelo se-ETA yenziwe lula kakhulu ngenkqubo entsha ye-elektroniki. Oku kuncede abahambi ukuba benze isicelo solu xwebhu nakweyiphi na indawo. Ngamanyathelo ama-3 alula, umntu unokugqibezela inkqubo yevisa.
Gcwalisa ifomu lesicelo: Gcwalisa ifom yesicelo kwi-ETA yaseMorocco. Ukwenza inyathelo lokuqala kukukhuphela ifom yesicelo kwiwebhusayithi karhulumente. Oku kususa isidingo sokuya kwi-ambassy kwaye ulinde imigca emide. Landa nje ifom, uyigcwalise ngolwazi oluchanekileyo kwaye uyithumele.
Ungeniso lwamaxwebhu: Ifom yesicelo seMorocco ETA kufuneka ingeniswe kunye namaxwebhu afunekayo. La maxwebhu kufuneka askenwe ngokucacileyo aze alayishwe.
Yenza intlawulo: Inyathelo lokugqibela ekufuneka lenziwe kukuhlawula umrhumo we-ETA. Ungasebenzisa ikhredithi okanye ikhadi lebhanki ukugqibezela le nkqubo. Emva kokuba onke amaphepha enziwe kwaye egqityiwe, uya kufumana i-ETA yakho kwi-imeyile yakho ye-imeyile, kwiintsuku nje ezimbalwa.
Nje ukuba abafaki-zicelo bayifumane i-ETA, kucetyiswa ukuba bafumane ukuprintwa okufanayo. Ukufika kwabo besiya khona, kufuneka bayizise kwabasemagunyeni.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-ETA ukuya eMorocco
IZiko loGunyaziso lokuHamba ngeMoto laseMoriya linokufumaneka kuphela ngabemi bamazwe ama-3 - iMali, iGuinea neRiphabhlikhi yaseCongo. Abemi abavela kwamanye amazwe kufuneka bafumane i-visa eqhelekileyo yokuhamba baye eMorocco.
Ukufumana i-visa akunikezi iindwendwe ilungelo lokungena kweli lizwe. Abaphathi bezokufika kwisikhululo seenqwelomoya banokumnqanda umntu ukuba angangeni eMorocco ukuba bafumana nawuphi na umbandela ngexwebhu okanye nangawuphi na umcimbi.
Yintoni i-ETA yabakhenkethi baseMoriya?
Urhulumente waseMorocco usungule inkqubo ye-ETA evumela iindwendwe ukuba zenze izicelo kwaye zifumane ii-visa zabo kwi-Intanethi, ngaphandle kokutyelela iOfisi yaseMoriya.
Yintoni ukusebenza kwe-ETA yaseMorika?
Yakuba ivunyiwe imvume, isebenza iiyure ezingama-75 okanye iintsuku ezingama-90 ekungeneni, kuxhomekeke kwi-visa.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo ukufaka isicelo se-ETA yaseMorika?
Uya kucelwa ukuba ungenise la maxwebhu alandelayo ngesicelo sakho se-visa-ipasipoti, ifoto yomenzi-sicelo, itikiti lokubuya ngenqwelomoya, isitetimenti sasebhankini kunye neinshurensi yokuhamba / yezempilo.
Ngaba kufuneka ndiveze naluphi uxwebhu, xa ndifika eMorocco?
Ewe, ekufikeni kwabo eMorocco, iindwendwe kufuneka zinikezele ngala maxwebhu alandelayo-i-ETA evunyiweyo kunye nencwadana yokundwendwela.
Ndingayifumana imbuyekezo, ukuba isicelo sam se-ETA siyaliwe?
Hayi, abafaki zicelo abayi kuhlawulwa ngembuyekezo yemali ye-visa ukuba isicelo sabo siyaliwe. Kufuneka baphinde bafake izicelo ze-visa.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe yi-eVisa enye yaseMorika?
I-eVisa esemthethweni yaseMoriya ivumela kuphela ungenelelo olunye. Oku kuthetha ukuba umntu ofaka isicelo unokundwendwela eMorocco kube kanye, kule visa.
Yeyiphi imiqathango ekufuneka ipasipoti yam ihlangane nayo ukuze yenze isicelo se-ETA eya eMorocco?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa yokuya eMorocco, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni ixesha elingangeenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-ETA yaseMorika?
Unokukhetha nayiphi na indlela yokuhlawula kwi-Intanethi ukuhlawula umrhumo we-eta. Unokwenza intlawulo usebenzisa ikhadi letyala elisebenzayo okanye ikhadi lebhanki.
Uya kufumana ileta yakho yokuvuma ye-ETA kwi-ID yesazisi osichazayo ngelixa usenza isicelo se-Visa. Unokuzikhuphelela i-eVisa kwaye ufumane iprinta.